Ukubonelelwa ngoLwesihlanu omnyama kuza kwizicelo zeMacOS | Ndisuka mac
NgoLwesihlanu omnyama ugubungela yonke into kwaye ngokuqinisekileyo lilizwe lezicelo. Ezinye iinkampani zikwaqhubela phambili izaphulelo kunye nokunyuselwa. Kule meko, ngokusebenzisana nabaphuhlisi, ngentsebenziswano nephepha laseMelika 9to5mac, bakwazile ukusinika inyanda Usetyenziso oluphezulu lweenotshi zeedola ezingama-30 kuphela. Sithetha ngezicelo kwinqanaba lePDF yeNgcali, iRoxio Toast Titanium. Izicelo ezisibhozo, eziza kuba kwintengiso, ixabiso le- $ 493. Ngabo uya kuphucula imveliso emsebenzini weofisi, de ube ufumana iifonti zenqanaba lokuqala. Konke oku kubulela kwikhowudi yokuthengwa kwezi zicelo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufikelela kwiphepha le- NgoLwesihlanu oMnyama Mac Bundle Xa uthenga, kufuneka ufake ikhowudi elandelayo kwinxalenye yesaphulelo: I-BFMAC9. Izicelo esiza kuzifumana ngaphakathi kwale phakheji zezi zilandelayo:
Ingcali yePDF 2.2 yeMac Ixabiso elizimeleyo elifunyenwe yi- $ 59,99. Ibe sesinye sezona zicelo zibalulekileyo zeMac ngo2015. Ngayo unokuhlela kwaye uchaze iifayile zePDF ngesantya esiphezulu, ngelixa usebenza njengeqela kunye noogxa bakho
Roxio Toast 16 Titanium: Esi sicelo sixabiso $ 99, sithengwe ngokukodwa. Le nguqulo isivumela ukuba sithathe ividiyo ngokuthe ngqo kwiscreen seMac kwaye sithumele umxholo kwinani elikhulu leefomathi.
Ifolda emiselweyo X 5: Ixabiso layo, $ 34. Umboniso we-vitaminized. Ivumela ukumaka, ukunika igama kwakhona, ukucofa, ukongeza izimvo kuyo nayiphi na ifayile.
I-WALTR 2 yeMac: Kwi- $ 34,95 kwintengiso. Ikuvumela ukuba ugqithise ngokulula iifayile zeendaba kwizixhobo zakho ze-iOS ngaphandle kwe-iTunes
Ukuhamba kwe7: Enye insiza exabiso kwi $ 99 Ikuvumela ukuba wenze iiwebhusayithi ezimangalisayo ukusuka ekuqaleni, ngaphandle kolwazi oluninzi.
Isitayile 7 -Ikuvumela ukuba uhlele i-CSS yayo nayiphi na iwebhusayithi ngexesha lokwenyani.
Umbhalo wobugcisa 3Ixabiso le € 29. Yenza iifonti ezintle zeeprojekthi zoyilo lwegraphic.
IMacReviver: Ixabiso li- $ 49,99. Icoca kwaye isebenzise iMac, ishiye iphantse ibe ntsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Imicimbi emnyama yangoLwesihlanu iza kwiiapps zeMacOS
I-Canalys icinga ukuba i-3,9 yezigidi zeeyunithi ze-Apple Watch LTE zithengisiwe kule Q3